I-Cottage Chic Loft- Downtown 2 Igumbi lokulala-Imboniselo yamanzi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJanis
Amagumbi amabini okulala, amagumbi amabini anemigangatho emibini kwiSitalato saManzi seMbali, eSt Andrews ngaselwandle. Ifakwe kwisakhiwo se-1860's ngaphezulu kwevenkile embindini wesithili sezorhwebo, le ndlu isandula ukulungiswa inemibono yamanzi, ikhitshi eligcweleyo, indawo yokuhlala enendawo yokutyela, kunye negumbi lokuhlambela elinebhafu yevintage claw foot neshawari. Inqanaba lesibini libonisa indawo ephezulu enamagumbi amabini okulala - elinye linebhedi yenkosi kwaye elinye linamawele amabini.
Le ndlu ifaneleka kakuhle ukubaleka kwezithandani, iimpelaveki zamantombazana, okanye iintsapho ezinabantwana abadala.
Ibekwe kumgangatho wesibini nowesithathu, phezu kweshishini elisebenza emini, ngenxa yokhuseleko kunye nezizathu zengxolo le yunithi ayifanelekanga kubantwana abangaphantsi kweminyaka eyi-12, iintsana ezingahambi ngaphandle. Ngenxa yokuba ikumgangatho wesibini nowesithathu, ayifanelekanga kwabo banemiba yokuhamba.
Umgangatho wesithathu indawo yokulala yahlulwe yangamacandelo amabini- inkosi enenkosi (enomandlalo we-Endy) kunye negumbi lokulala lesibini elineebhedi ezimbini ezingamawele. Iingcango zaseFransi zahlula inkosi kwigumbi lokulala lesibini. Ukufikelela kwinkosi ngegumbi lokulala lesibini - ilungiselelo elilungele kakhulu iintsapho okanye abahlobo abasondeleyo. Kukwakho nebhedi yesofa yokumkanikazi kwindawo yokuhlala evumela iindwendwe ukuba zikhethe iindlela ezininzi zokulala. Nceda uqaphele ukuba inani eliphezulu leendwendwe zendlu yi-4. Naziphi na ngaphandle koku kufuneka zivunywe xa ubhukisha kwaye zixhomekeke kwintlawulo eyongezelelweyo ye-$ 25 ngobusuku.
Igumbi lokuhlambela elinebhafu yonyawo lokuqala lwesakhiwo kunye neshawari ibekwe kumgangatho wesibini omelene nendawo yokuhlala.
I-HDTV ene-I-Apple TV, izitishi zeTV eziqhelekileyo
4.95 ·Izimvo eziyi-92
2016 Iindawo Great e Canada Winner - Great Street
Isitalato saseWater sibe yintliziyo kunye nomphefumlo wobomi borhwebo noluntu eSt. Andrews by-the-Sea iminyaka engaphezu kwama-200 – eyona ndawo kugxilwe kuyo kubahlali baso abali-1,800 kunye neendwendwe ezingama-80,000 zonyaka.
Imbali yesitalato saManzi yinxalenye yoluntu lwentliziyo yaseSt Andrews kunye nesazisi. Isitalato esijolise kubahambi ngeenyawo sidibanisa uyilo lwedolophu eneendawo ezivulekileyo kunye nembonakalo entle yolwandle olukufutshane. Ngelixa uyilo lwesitrato kunye noyilo lwezakhiwo lubhekiselele kuluntu kwiminyaka engama-200 yembali, indawo ngokwayo iye yavela ukuze ihlale iyinxalenye yemihla ngemihla kubomi babahlali ngeenjongo zorhwebo nezolonwabo. Isitrato sikwangumtsalane kuluntu lwabakhenkethi abangaphezu kwama-80,000 ngonyaka. Inezindlu zokutyela eziqhelekileyo, iivenkile, iigalari, kunye namanye amathuba ohambo. Isitrato sikwangumva weMarike yamaFama yeveki kwaye ibamba iminyhadala yasekuhlaleni kuwo onke amaxesha onyaka.
Umbuki zindwendwe ngu- Janis
Umninimzi uqhuba ivenkile ebekwe kumgangatho wokuqala wesakhiwo kwaye uyafumaneka emini ngemibuzo, ulwazi, njl.